Iwashi lezinkanyezi lasePrague: izici nokusebenza | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 10/01/2022 09:46 | Ukwahlukanisa
Njengoba sazi, amadolobha amaningi anezinto ezibonakalayo ezihlukile nezikhethekile. Kulokhu, sizokhuluma ngakho Iwashi lezinkanyezi lasePrague. Iwuphawu lwasePrague futhi inomsebenzi othakazelisayo kakhulu. Yasungulwa ngonyaka ka-1410 futhi bathi baletha amabhadi uma iyeka ukusebenza.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi iwashi lezinkanyezi lasePrague lisebenza kanjani nezinye zezindaba zalo.
1 Iwashi lezinkanyezi lasePrague
3 Izici ezibalulekile zewashi lezinkanyezi lasePrague
4 Isiqalekiso sewashi
Lokhu kufanele ubone uma uya ePrague. Iwashi laleli dolobha lezinkanyezi lingenye yezinto ezikhanga izivakashi ngemuva kwalo, futhi akuyona into encane. Inendaba ephoqayo (kanye nesiko) engashintshwa ibe inoveli noma imuvi. Yethulwa ngo-1410 ngu-Jan Ruze, isibe neminyaka engama-605 kusukela lapho.
Indaba yakhe, njengoba bengisho, inemininingwane eminingi emangalisayo: baphuphuthekisa umakhi oyingcweti, bamvimbela ukuthi aphinde enze iwashi elifana naleli, abanye abalibona njengentelezi yokugcina idolobha liphephile ... Namuhla sibeka konke ukunaka kwethu. ukusebenza njengoba iminyaka ihamba futhi ubuchwepheshe buqhubeka nokukhanga noma yimuphi umthandi wewashi le-analog namasistimu.
Iwashi lasePrague Astronomical linomklamo we-astrolabe onomklamo onezingxenye ezintathu okwazi ukumaka izikhathi ezinhlanu ngesikhathi esisodwa. Phezulu, phakathi kwezivalo ezimbili, sinenkundla yemidlalo yaseshashalazini yabaPhostoli Abayishumi Nambili. Ngamunye wabo ushiya njalo emizuzwini engama-60 ukukhombisa ukuthi yisiphi isikhathi. Izinombolo zesimanje kakhulu kunamawashi nezinsuku zekhulu le-XNUMX.
Ezansi sinekhalenda elinezithombe zezinyanga nezinkathi zonyaka, futhi elibonisa abangcwele bosuku ngalunye lonyaka. Zombili izingxenye ziyigugu futhi zinentshisekelo enkulu yobuciko, kodwa igugu laleli washi lisemzimbeni omaphakathi. Lesi siqeshana ekuqaleni saklanywa ngo-1410.
Iwashi likwazi ukusho isikhathi ngezindlela ezinhlanu ezihlukene, futhi isimiso salo sezingxenye eziwumshini singesinye sezifuna ukwazi kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, sinelanga elisagolide elizungeza isiyingi se-ecliptic, lenza umnyakazo oyi-elliptical. Lesi siqeshana siyakwazi ukusibonisa amahora amathathu ngesikhathi: ukuma kwezandla zegolide ezinombolo zamaRoma kukhombisa isikhathi ePrague. Njengoba isandla siwela umugqa wegolide, sibonisa amahora ngesikhathi esingalingani, futhi ekugcineni, eringini yangaphandle, amahora ngemva kokuphuma kwelanga ngokwesikhathi saseBohemian.
Okwesibili, iyakwazi ukukhombisa isikhathi phakathi kokuphuma nokushona kwelanga. Ohlelweni oluhlukaniswe "amahora" ayishumi nambili. Uhlelo lutholakala ebangeni eliphakathi kwelanga nendawo ephakathi nendawo. Izilinganiso ziyahlukahluka kuye ngesikhathi sonyaka, njengoba usuku aluwona amahora ayishumi nambili okukhanya, futhi akuwona amahora ayishumi nambili ebusuku. Eyokuqala yinde ehlobo kanti ebusika ngokuphambene nayo. Kungakho izimpawu zokucaphuna zisetshenziselwa ukukhuluma ngamahora kuleli washi elimaphakathi.
Okwesithathu, emaphethelweni angaphandle ewashi, sibhala izinombolo ngombhalo wegolide we-Schwabacher. Baphethe ukukhombisa isikhathi, njengoba senza eBohemia. Iqala ukumakwa ngo-1 ntambama. Iringi ihamba unyaka wonke ukuze ihambisane nesikhathi solar.
Izici ezibalulekile zewashi lezinkanyezi lasePrague
Bese siba nendandatho yezinkanyezi enesibopho sokukhombisa indawo yelanga kuyi-ecliptic, okuyijika lomhlaba "elihambayo" lizungeza ilanga. Uma ungumlandeli we-zodiac, uzothola ukuthi ukuhleleka kwala maqoqo ezinkanyezi kuphambene nokulandela iwashi, kodwa kunesizathu saleli lungiselelo.
Ukuhleleka kwamasongo kungenxa yokusetshenziswa kwe-stereoscopic projection yendiza ye-ecliptic esekelwe eNorth Pole. Kungase kubonakale kuyinqaba, kodwa leli lungiselelo likhona nakwamanye amawashi ezinkanyezi.
Ekugcineni, sinenyanga ekhombisa izigaba zamasathelayithi ethu emvelo. Ukunyakaza kufana newashi eliyinhloko, kodwa ngokushesha okukhulu. Njengoba ubona wonke amaqhuqhuva aleli washi lezinkanyezi akule centrosome, cha, asikaqedi, ngoba asekhona amanye.
Iwashi linediski egxilile phakathi nendawo kanye namadiski azungezayo amabili asebenza ngokuzimele: iringi ye-zodiac kanye nomphetho ongaphandle obhalwe ngesi-Schwabacher. Ngokulandelayo, inezandla ezintathu: isandla, ilanga elidlula kulo ukusuka phezulu kuya phansi, lisebenza njengesandla sesibili, kanti okwesithathu, isandla esinamaphoyinti enkanyezi axhunywe ku-zodiac.
Inganekwane ithi umbazi owayisungula ngo-1410 wenze umsebenzi oncomekayo kangangoba abantu ababeyithumile bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ngeke ayiphinde ukuze ihluke emhlabeni, bamvala amehlo.
Ngokuphindiselela, wangena ewashini wamisa umshini wakhe, ngesikhathi esifanayo, ngokuyisimangaliso, inhliziyo yakhe yayeka ukushaya. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kwakunenkolelo yokuthi ukunyakaza kwezandla zayo nokudansa izinombolo zayo kuqinisekisa intuthuko enhle yedolobha, nokuthi iwashi liyeka ukusebenza kwakuzoletha amashwa ePrague.
Ngokuhamba kwesikhathi njalo ngehora, umbukwane oyinkimbinkimbi wawubukwa ngomzamo wokuthulisa umbhangqwana phakathi nezinyanga owawucashe ngawo ngemva kweseyili, futhi wawuqhubeka umangaza amakhulu abantu ngamakhenika awo athuthukile. Imbangela esheshayo noma ukuqondana ukuthi ukuphela kwesikhathi okwenzile Kwakungonyaka wezi-2002 lapho umfula u-Vltava udla izindwani futhi idolobha labhekana nezikhukhula ezinkulu emlandweni walo. Ngakho lapho iwashi likaJanuwari linquma ukuvala iwashi ukuze lilungiswe, kwaba nohlobo oluthile lokwethuka (nokudumala kwezivakashi) phakathi komakhelwane balo ababekholelwa ezeni.
Iwashi linekhalenda eliyindilinga elinezindondo ezimele izinyanga zonyaka; izinhlaka ezimbili -enkulu, phakathi-; i-quadrant yezinkanyezi eyayisetshenziswa ukukala isikhathi eNkathini Ephakathi (futhi lokho kubonisa isikhathi eYurophu Ephakathi naseBabiloni, kanye nendawo yezinkanyezi) futhi imibala yazo ngayinye inencazelo: obomvu wukuntwela kokusa nokushona kwelanga; ubumnyama, ubusuku; noluhlaza okwesibhakabhaka, usuku.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Iwashi lezinkanyezi lasePrague